Shintsha ebusika ukuya kwixesha lehlobo
Ngonyaka ekupheleni kuka-Matshi izandla zamehlo zitshintsha ikhosi yazo. Omnye uyavuya malunga nale mcimbi, kwaye abanye abayithandi. Utshintsho olubusika ukuya kwixesha lehlobo lidala ukuphikisana phakathi kwabaxhasi beli ganeko kunye nabachasi. Abaxhasi benguqu baxhomeke kakhulu kwi-energy saving, abachasene neenguqulelo bavikela ngokugqithiseleyo imbono yabo yokuba ukudluliselwa kweentolo zichaphazela kakubi impilo kwaye kungekhona impilo yabantu.
Yintoni engcono: ukugcina impilo yakho okanye ukugcina ugesi?
Lo mbambano uphendululwa ngokuthelekiswa. Okwangoku, ingxaki yemithombo yamandla iyabukeka kakhulu kwilizwe lethu. Ewe, ummi ophakathi akayi kuba neengxaki zokulondoloza amandla. Ukutshintshwa kwesoxesha lokulondoloza imini kunika isisombululo esincinci kule ngxaki, ngoko ke ukuba i-Russia yonke ichaphazelekayo, ngokoqoqosho luyabonakala. Idatha ebonisa ngokusemthethweni ukuba yonke unyaka, kunye nokutshintshwa kwexesha lasehlotyeni, ilizwe lethu lilondoloza ama-ruble angaphezu kwezigidi ezi-2.
Impembelelo kwimpilo yenguqu ekuphumeni kwexesha ngenxa yeso sizathu sengqondo. Abantu baphoqeleka ukuba batshintshe inkqubo yabo yemihla ngemihla kunye neshedyuli, abantu abaninzi abayiqonda kakuhle. Ewe, le nto ingabangela iimvakalelo eziphazamisayo kunye nomoya ongekho, okhokelela ekunyuseni uxinzelelo lwegazi, umva wokukhathala nobuthathaka. Siphakamisa iyure kwangaphambili - oku akunjalo kumntu wonke. Ukuze ugweme iingxaki ngentlalo-ntle, kufuneka uguqule isimo sakho sengqondo ekuguquleleni kwezandla zewashi, uthathe ngokungenanto.
Iinyani ukuba emva kokutshintshwa kwexesha lehlobo, inani lezengozi, izingozi kunye nezinye iinkathazo ziya kwandisa idatha engekho. Ukongezelela, kwithuba lentsasa, ezinye izinto ezininzi zichaphazela impilo kunye nempilo yomntu, isiphumo saso sichazwa ngenguqu kwixesha lasehlotyeni-ngulo utshintsho lwemozulu, ukwanda kwenzalo yelanga, izinto zeemeteorological. Kwakhona ekwindla nasentwasahlobo kukho ukugqithisa kwezifo ezingapheliyo, kukho ukungabikho kwamavithamini emzimbeni. Ngelinye igama, ngeli xesha lonyaka kufuneka ube nenyameko kwimpilo yakho kwaye awuyi kuvakalelwa kakubi xa uya kwixesha lehlobo.
Abaninzi bakholelwa ukuba ukutshintshwa kwesoxesha lasehlotyeni kunzima kakhulu kumntu, ekubeni umntu uphatha kakubi kwi nyaniso yokuba kufuneka avuke ngaphambili. Kodwa kuqinisekiswe ukuba umzimba womntu ulungelelanise ngokupheleleyo kwixesha elitsha ngaphantsi kweveki. Kuya kuba neengxaki ezincinane xa singagxila kwimpilo embi emva kokudluliswa kweentolo.
Kukho iindlela ezininzi zokuziva usebenze, ujabule kwaye unempilo, nangona ufanele uvuke iyure ngaphambi kwexesha eliqhelekileyo. Okokuqala, ixesha elithile ngaphambi kokutshintshwa kwezandla zewashi kunconywa ukuba uqale ukuthatha iivitamin complexes ezandisa ukhuseleko kunye nokumelana nokunyanzeliswa. Okwesibini, qalisa ukusa kwakho, njengesiqhelo: ngeesilwanyana ezahlukeneyo okanye ngekomityi ecocekileyo, ikhofi enamandla. Ngosuku lokuqala lokutshintsha iintolo, izityalo ze-adaptogenic zingasetyenziswa: i-ginseng, i-eleutherococcus kunye noManchu aralia. Imifuno yale mihlambi ithatha ngaphakathi kwentsasa ye-15-20 yehla ehlobo elicocekileyo okanye elihlanjululweyo. Ezi zityalo zandisa ithoni yomzimba wonke, ukuphucula isimo sengqondo kunye nenhlalakahle, unikezela impilo yonke imihla. Ebudeni bemihla, gcina umoya wakho ocolileyo uhlaza oluhlaza.
Ukongezelela, cinga ngento yokuba ukuguqulwa kweentolo zithetha ukuba intwasahlobo iyagubha ngokukhawuleza kwaye kungekudala kuya kuba nemfudumala, iintsuku zehlobo. Vumela inguqulelo yaminyaka yonke yeentoloko ibe ngumqondiso oncomekayo kuwe ukuba kungekudala ihlobo liza kuza.
Indlela yokucoca umzimba onamandla angalunganga
Indlela yokucoca umzimba
Amabala amhlophe kwiinki
Unyango lwesifo esingapheliyo se-pyelonephritis
Yintoni enokuyenza ngeedpes?
Kalina obomvu, iimpawu zonyango
I-Meatloaf kunye nebhekoni, ebhakawa ngamahlamvu e-rosemace
Iidlophu zokutya izitya ezimnandi zeetafile
Ikhefu lebele lebele
Imizimba ye-Physiotherapy kwi-gynecology
Amakhukhamba amancinci amancinci atyo kwi-jar, ipake kunye nengxowa-zokupheka zokupheka ngokukhawuleza
UAsou watshilo inyaniso ngomyeni wakhe-"umtyholi"
Amakati aseSiamese kunye neBalinese - ikosikazi kunye nodansa
Ukupheka i-porridge yengqolowa
Ukunyangwa kwempumlo ye-runny kunye neendlela zokukhulelwa kwabantu
Ukutya kukaDkt. Bormental: ngokuchanekileyo nangempumelelo
Ukucwina kwizisini - izizathu zokungahambi kakuhle
IHoroscope yeTaurus-Abafazi ngoFebruwari 2017
Imifanekiso emihle nehlekisayo ukusuka ngoMatshi 8, 2018
I-Raglan idibanisa entanyeni
Iimidlalo zokudla kwi-spicy sauce